Umlando ngeLembe – iAfrika
Izibongo zamakhosi, amabutho kanye namanye amaqhawe asemlandweni wesizwe samaZulu asuselwa ezigamekweni zawo ezisemlandweni, ngisho nazo izithakazelo zamanye amaqhawe ezibongo ezithile asuka kuzo izigameko ezenzeka, izinselelo ababhekana nazo kanye nokunqoba kwabo. Ingakho nje kungamangazi ukuzwa ngabazeka umlando ukuthi izibongo zesilo umntwana kaNodumehlezi kaMenzi ezimayelana neLembe zisukaphi. Sithi ake siyithi qaphuqaphu inkulumo ngeLembe.
Abazi umlando bathi ke iLembe kwabe kunguhlanya lwaka Mhlongo isibongo, kanti lalulwa nokuzilwela loluhlanya, kanti kuthiwa nemfuyo yabantu lase luyiqedile impela ngejozi liyibulala. Nalana ke Uteku kwabafazi bakaNomgaga lwaziveza ubuqhawe balo ngoba phela uShaka wathatha isinqumo sokuthi uzonikela khona kulelo hlathi elihlala uhlanya lwakaMhlongo ngenhloso yokuthi kube abhekane naye ubuso nobuso. Lezi zindaba zokuthi uShaka uzobhekana neLembe azihlalanga phansi zingewona amazolo zahamba ngomoya zaze zafika enduneni yenkosi uDingiswayo, le nduna kwabe kunguNgomane wakwaMdletshe isibongo. UNgomane uthe engezwa ukuthi uShaka uhlose ukubhekana nohlanya uLembe wabe esezekela inkosi uDingiswayo ngaleyondaba.
Ekuzweni lokho inkosi uDingiswayo wakhipha elokuthi cha akayizwisisi kahle lekoyuthi umntwana abhekane neLembe, ayinambithisiseki impela nje kodwa ngokuhamba kwesikhathi wabe wathambisa inhliziyo wakuvumela lokho. UShaka wabe esenikela ehlane, eyobhekana noLembe. Kuthiwa zathathana izinqothonto impela, kwaba ongaphansi nongaphezulu. Kwathi ngokuhamba kwesikhashana uShaka engenile ehlathini zadumelana noLembe wabe esephuma esehlabene ngoba phela wayephethe ikhanda likaLembe esehamba nalo eyolitshengisa inkosi uDingiswayo nesizwe sonke sakwaMthethwa okuyilapho uShaka owayehlala khona ebukhosini bakwaMthethwa. Ngekhanda likaLembe wayezotshengisa ukuthi umnqobile.Laqhamuka kanjalo igama noma isibongela somntwana uShaka ukuthi “ingonyama ehlome ehlathini njengohlanya Ilemb’ eleq’ amanye amalembe ngokukhalipha”. Njengoba sichazile endimeni yokuqala ukuthi izibongo zamaqhawe zisukaphi umsuka wazo, naye ke uNodumehlezi kaMenzi wazithola kanjalo ezakhe izibongo.
Le yokuthi “ilemb’ eleq’ amanye amalembe ngokukhalipha” ihlobene nesikhali esibukhali ilembe lokho okusha ukuthi umntwana uShaka wayebukhali ehlakaniphile ingakho ke nobuhlakani bakhe bufaniswa nokukhalipha, ngoba phela waluhlakaniphela uhlanya lwakaMhlongo uLembe bebhekene ngezinhlamvu walunqoba.
Tags Clan names, Ilembe, UShaka